तपाईं एक निजी देश घर वा घरेलु बस्नुहुन्छ भने, तपाईंले शायद प्रचुर मात्रामा स्प्रे पर्खाल मइस्चराइजिंग, जमीन तल प्रवाह गर्ने जेट को छत बाट वर्षा पानी कसरी थाहा छ। यहाँ समस्या मात्र कुरा को सौंदर्य पक्ष छ: "पानी उपचार" जग केही वर्ष गम्भीर क्षतिग्रस्त गर्न सकिन्छ।
तर सबै नकारात्मक परिणाम पहिल्यै स्थापित छत नाली निर्णय गर्नेछ। निस्सन्देह, आज तिनीहरूले पूरा स्टोर र कम्पनीहरु बेचिन्छन् नाली को स्थापना, र गणना छैन। तर किन अतिरिक्त पैसा तिर्न, जब सबै आवश्यक सञ्चालन आफ्नै हातले, व्यवसायीक देखि काम गर्न चित्रकला बिना गर्न सकिन्छ?
पहिलो, तपाईं जो तपाईंले छत नाली लागि गरिरहेको गरिनेछ सामाग्री चयन गर्नुपर्छ। अक्सर तिनीहरूले रूपमा उचित मुद्रा को लागि कुनै पनि निर्माण को आधार मा पाउन सकिन्छ, जस्ती इस्पात पट्टी बनेको छन्। साथै, तपाईं राम्रो छत वा यस्तै काम को मिल्दाजुल्दा पछि अधिशेष हुन सक्छ। यसको लम्बाइ परिभाषित गरेर छत को अन्त मापन। भौतिक जसको चौडाइ 25 सेमी छ को छत हामी पानाहरू बाट पानी नाली बनाउन। पानामा उपलब्ध सामाग्री को लम्बाइ छ, प्रत्येक अन्य संग खण्डहरूमा कस्नु गर्न कम आवश्यकता। साथै, अप गर्न तीन मिलिमिटरमा एक व्यास, र स्क्रू र बोल्ट को एक सेट एक तार किन्न भूल छैन।
हामी धातु प्रयोग
संवाददाता खण्डहरूमा शक्ति कट पानाहरू संग। हामी काम धेरै राम्रो यस मामला मा कट गुणस्तर, रूप, यंत्रीकृत छ सुझाव। 90 डिग्री को एक कोण मा एक पल्ट अर्को मोड्नु नाली छत लागि देखि आत्म-गरे मिसिन को मद्दतले। बन्धन लागि आफ्नो ड्रिल छेद मा प्रत्येक अन्य देखि 0.3-0.4 मिटर दूरी मा। , पिरोया तार लूपहरूको प्वालहरू मा बुझे तिनीहरूलाई झुकन भनेर बन्धन लागि सुविधाजनक हुक तपाईं डूब लागि किनेको थियो।
प्रणाली को भागहरु स्थापना गर्दा प्रत्येक अन्य गरेको काखमा हुनुपर्छ, र तिनीहरूलाई बीच सुरक्षित गर्न केही सीलेंट भरिएको गर्न सकिन्छ। यो एक अपवाह ड्रेनेज सिस्टम बनाउन वा जमीन पकड ट्यांक सम्मिलित एक ठाउँमा घर को पर्खालहरु धेरै राम्रो हुनेछ। therein संचित पानी सिंचाई infield लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, यो ड्रेनेज सिस्टम अन्यथा पानी तपाईं योजना बनाएका थिए के मा, गलत दिशामा जाने, एक ढलान हुनुपर्छ।
हामी प्लास्टिक बोतल प्रयोग
तपाईं धेरै कम वित्त खर्च, एक नगरेर छत पनि सजिलो बनाउन सक्छ। सामान्य मा, पैसा तपाईं फास्टनरों बाहेक खर्च। एक मात्रा मा धेरै पारंपरिक प्लास्टिक बोतल लागि सुरु डेढ लिटर देखि नजर लागि। आफ्नो रंग मात्र आफ्नो सौंदर्य प्राथमिकताहरू द्वारा सीमित छ। काम - यो तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सजिलो छ धीरे sidewall मार्फत काटन, तल र घाँटी काटेर छ। यस्तो हेरफेर breaching पछि, तिनीहरूलाई सँगै तार वा सीलेंट सम्बन्ध गाँसिसकेको प्रत्येक अन्य मा बोतल सम्मिलित आवश्यक छ। हामी यसको अभिप्रेत स्थानमा डिजाइन अपनाउँछन् र आफ्नो काम पराउँछु।
हामी पहिले नै भनेका छन्, एक तरिका त्यहाँ पनि सजिलो: बस भण्डारमा एक तयार बनाएको ड्रेनेज सिस्टम किन्न र त्यसपछि यो छत मा माउन्ट। त्यसैले यस्तो तरिकाले छत बाट सकिन कसरी भन्ने पनि सबैभन्दा अनुभवहीन निर्माता सामना गर्न धेरै सजिलो छ। यो संरचना हावा को एक हावाको भ्कोका हल्का प्लास्टिक चोर्नु गर्न सक्छन्, समाधान गुणस्तर खाँचो उल्लेख गर्नुपर्छ।
के Tombstones हुन सक्छ?
एक ईटा कसरी राख्नु गर्न? निर्माण व्यवसाय को एक सानो भ्रमण
Kosour - यो के हो? सिढी एक उडान। kosour इस्पात
आधुनिक र स्टाइलिश balustrade - व्यावहारिकता र सौन्दर्य संयोजन
"ब्लक-घर" बसाई सराई: प्रकार, वर्णन, फोटो
क्रास्नोडार कलेज हो। 9th ग्रेड पछि क्रास्नोडार कलेज हो। क्रास्नोडार राज्य कलेज
एक फ्रेम घर को पर्खालहरु को व्यवस्था: योजना र सिफारिसहरू को विवरण
मोटरसाइकल मिलाउने - नयाँ जीवन फलाम घोडा
सबै भन्दा ठूलो क्षेत्र ताल रूस: सूची, नाम, विवरण र सुविधाहरू
स्नानको लागि इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक सौना ओवन: निर्देशनहरू, समीक्षाहरू, मूल्यहरू
केहि सामान को बिक्री सर्तहरू
एक महिलाको bathrobe कसरी चयन गर्न
उमेर लागि छोराछोरीको वस्त्र आकार - बुझ्न सजिलो!
सबै भन्दा राम्रो र सही नुस्खा फोक्सो सूप: स्ट्यु, आफ्नो उप र अन्य
क्राकरी मेयर र BOCH: ग्राहक समीक्षा
मानिसहरू लागि बोसो बर्नर स्पोर्ट: समीक्षा